Celebrity Corner - CC
ဆေးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သမီးလေးရဲ့ထူးချွန်ထက်မြတ်မှုကြောင့် ဆေးခန်းပြရာတာတောင် ဇိမ်ကျကျပြသခဲ့ရကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာပြောလာတဲ့ မေကဗျာ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သမီးလေးရဲ့ထူးချွန်ထက်မြတ်မှုကြောင့် ဆေးခန်းပြရာတာတောင် ဇိမ်ကျကျပြသခဲ့ရကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာပြောလာတဲ့ မေကဗျာ မင်းသမီးချော မေကဗျာကတော့ ကလေးမေမေ အသက်
Celebrity Corner | 26/06/2022
ဆေးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သမီးလေးရဲ့ထူးချွန်ထက်မြတ်မှုကြောင့် ဆေးခန်းပြရာတာတောင် ဇိမ်ကျကျပြသခဲ့ရကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာပြောလာတဲ့ မေကဗျာ မင်းသမီးချော မေကဗျာကတော့ ကလေးမေမေ အသက် (၃၉) နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ငယ်ရွယ်နုပျိုသူတွေလိုက်လို့မမှီတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ မေကဗျာကတော့ အခုဆိုရင် ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ကူးဖြစ်တော့ပဲ စီးပွားရေးအလုပ်တွေနဲ့ မိသားစုအရေးကိစ္စတွေကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် မေကဗျာက သူမရဲ့ တစ်ဦးတည်းရှိတဲ့သမီးလေး ဂင်္ဂါမေအတွက် လိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ။
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပဲ ဖန်တီးပေးတတ်ပြီး သူမကိုနားလည်မှု အပြည့်နဲ့အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို ပြသလာခဲ့တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ…. ဖေ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါဟာ သူမရဲ့ရည်းစားဟောင်း အဆိုတော်နဲ့ ပြတ်ဆဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အများအပြားရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကိတ်ဒါဒါဟာ ရည်းစားဟောင်းအဆိုတော်နဲ့ ပြတ်ဆဲသွားခဲ့တာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သလို သူမရဲ့အချစ်သစ်နဲ့လည်း သာယာအေးချမ်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်သစ်နဲ့တွေ့ရှိပြီး သာယာတဲ့အချိန်ကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့
သူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ဟာဝါရီကမ်းခြေတွင် ဒေါ်လာသန်းချီအကုန်အကျခံပြီး ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်…. အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ စမိုင်းလ်တို့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအမေရိကမှာမိသားစုလိုက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကပရိသတ်တွေနဲ့နီးကပ်စွာရှိပေမယ့်အခုမှာတော့အနည်းငယ်ဝေးကွာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေသူတို့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ပုံရိပ်လေးတွေကြည့်ပြီးချစ်နေရတာပါ။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ မအောင်မြင်ခင်က အခက်ခဲတွေကိုတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခုလိုအောင်မြင်ချိန်မှာ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာအရင်မလုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေလုပ်ရင်းဖြတ်သန်းနေတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကိုကြည့်ပြီးချစ်နေရတာပါ။ခုမှာလည်းစမိုင်းတစ်ယောက် Queen သရဖူလေးနဲ့လှနေတာပါ။ ဘယ်လိုတောင်လှနေလဲဆိုတာကတော့အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်။ Credit UNICODE သူမရဲ့မှေးနပှေဲ့ကို ဟာဝါရီကမျးခွတှေငျ ဒျေါလာသနျးခြီအကုနျအကခြံပွီး ခမျးနားစှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့
မတွေ့တာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက် ရွှေရောင်ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အားလုံးကသတိရနေကြတဲ့ဖွေးစိန်လေးကတော့ လက်ရှိမှာတလရမှာပါဝင်ရင်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေကြိုးစားအားထုတ်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ မိသားစုတွေနဲ့ဝေးရာမှာနေနေရပြီး အားလုံးကိုသတိရနေကြောင်းဖွေးစိန်လေးက အမြဲဆိုရှယ်ကနေမျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ အနုပညာအကယ်ဒမီဆုများစွာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ယနေ့လေးမှာတော့ဖွေးစိန်လေးက သူမကိုလွမ်းနေကြမယ့်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် လက်ရှိသူမရဲ့ပုံစံကိုဆိုရှယ်မှာမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ရွှေရောင်ဆံပင်အရှည်နဲ့ပိုလှနေတဲ့ ဖွေးစိန်လေးရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ပရဟိတစိတ်ဓာတ် ပြည့်ဝလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချီးကျူးတာကို ခံနေရတဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ…. ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေကို သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိတ်ရောကိုယ်ပါလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက လေးစားချစ်ခင်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အချိန်ရရင်ရသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပြီး
ချစ်ဇနီးလေးရဲ့မွေေးနေ့လေးအတွက် သူကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြီး ဘယ်လိုတွေစီစဉ်ထားလည်းဆိုတာကို ဗီဒီယိုနဲ့တကွပြသလာတဲ့ နေတိုး နေတိုးဆိုတာနဲ့ ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ အခုမှာတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ မကြာခင်လပိုင်းကမှ လက်ထပ်ခဲ့ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲလေးဟာ နိုင်ငံရေးအခြေနေတွေကြောင့် ခမ်းခမ်းနားနားတော့မလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာ သူတို့လက်ထပ်ပွဲလေးဟာရေပန်းစားခဲ့တာပါ။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပရိသတ်တွေရှေ့ကနေလည်းပျောက်နေခဲ့ တာပါ။ မကြာသေးခင်ကတော့သူတို့မိသားစုရဲ့အလှုပုံရိပ်လေးတွေတက်လာခဲ့တာပါ။ အခုမှာလည်းချစ်ဇနီးလေးရဲ့
မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့လက်ရှိပုံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီလေး မေသက်ခိုင်
Celebrity Corner | 25/06/2022
မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့လက်ရှိပုံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီလေး မေသက်ခိုင် မေသက်ခိုင်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကို အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောတစ်လက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။ လက်ရှိမှာတော့ မေသက်ခိုင်က အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ သာမာန်ဘဝလေးနဲ့ပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ မေသက်ခိုင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရှေ့ကနေ လုံးဝကိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့တော်တော်လေးကို အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့တာပါ။ သို့ပေမဲ့
ချစ်ရတဲ့သားလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြားလေးဆုတောင်းပေးရင်း ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ တစ်ချိန်က မင်းသားချော သတ္တိ
ချစ်ရတဲ့သားလေးရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြားလေးဆုတောင်းပေးရင်း ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ တစ်ချိန်က မင်းသားချော သတ္တိ တစ်ခေတ်တစ်ခါကပရိသတ်တွေသဘောကျခဲ့ရတဲ့ဗွီဒီယိုမင်းသားချောတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သတ္တိကို ပရိသတ်တွေမှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အနုပညာခြေလှမ်းတွေကျဲသွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိနေဆဲပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ သတ္တိက သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်သားချောလေးကို ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုချပြခဲ့တာပါ။ အဖေ့ရဲ့ ချောမောမှုအမွေကိုဆက်ခံထားတဲ့ သူ့ရဲ့သားချောလေးရဲ့မွေးနေ့အတွက် အခုလိုပဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တာပါ။”Happy birthday ..ပါ ချစ်သော သားလေးရေ…ဖေ့ဘဝ
မိသားစုနဲ့ တခြား အခက်အခဲတွေကြောင့် ပညာရေးမှာ မထူးချွန်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ မင်းဘုန်းမြတ်…
မိသားစုနဲ့ တခြား အခက်အခဲတွေကြောင့် ပညာရေးမှာ မထူးချွန်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ မင်းဘုန်းမြတ်… MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတစ်ဆင့် အနုပညာလမ်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းလာတဲ့ မင်းသားချောမော်ဒယ်မင်းသား မင်းဘုန်းမြတ် ကတော့ ပီပြင်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ရင်ထဲမှာ နေရာယူထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေ နဲ့ မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်ကို လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး အရင်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ စေတလုံးမောင်ဘုန်း
မင်္ဂလာပွဲ ၆ ပွဲလုပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်…
မင်္ဂလာပွဲ ၆ ပွဲလုပ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်… ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အပီပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ၊အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ယနေ့ထိ တိုင်ပါပဲ။ မင်းသားချောပြေတီဦးနဲ့အေးချမ်းသာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ထူထောင်ကာချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့